သတင်းစာဆရာကြီး အထောက်တော်လှအောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၇)နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပ?? - Yangon Media Group
သတင်းစာဆရာကြီး အထောက်တော်လှအောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၇)နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပ??
သတင်းစာဆရာကြီး အထောက်တော်လှ အောင်ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၇)နှစ် ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား ကို ဧပြီ ၂၈ ရက် ညနေ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်ရှိ House of Orchid ၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အထောက်တော်လှ အောင်ကွယ်လွန်ခြင်း(၂၇)နှစ် ပြည့်နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့် (ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး-ငြိမ်း၊ သတင်းဂျာနယ်တိုက်အုပ်)ကွယ်လွန် ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်လွမ်းဆွတ်သတိ ရအောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုများနှင့် ဆရာကြီး၏တပည့်များက ကြီးမှူးကျင်းပ ခြင်းဖြစ်သည်။
”အဖေကတော့ ဧပြီ ၇ ရက်ဆုံးတယ်။ လူကြီးနာပဲပေါ့။ အ မေကတော့ ဧပြီ ၂၆ ရက်မှာဆုံးတယ်။ အဖေကတော့ကွယ်လွန် ခြင်း (၂၇)နှစ်ပြည့်ပါ။ အမေက တော့ ကွယ်လွန်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အောက် မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားပါ”ဟု ကွယ်လွန်သူ အထောက်တော် လှအောင်၏သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန္တာကဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင်ပြောသည်။ ဆရာကြီးအထောက်တော်လှအောင်သည် သတင်းစာသမားတစ်ဦးအဖြစ်သာ တစိုက်မတ်မတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။
”အဖေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမှတ်တရတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဖေကတော့ သတင်းစာသမား ပဲလေ။သတင်းစာသမားဆိုတော့ အရင်ကတည်းက ပြောခဲ့ဖူးတာ ပေါ့။ ဘဘဦးဝင်းတင်က နိုင်ငံ ရေးလုပ်တော့ သတင်းစာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေး လုပ်တော့ အဖေ့ကို ဘဘကခေါ်ဖူးတယ်လေ။ အဖေကတော့ပြောဖူးတယ်လေ။ မင်းတို့လုပ်ပါကွာ။ မင်းတို့မကောင်းလည်း မကောင်း ကြောင်းရေးမှာပဲ။ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် မကောင်းရင် မကောင်း ကြောင်းရေးရမှာ ငါသတင်းစာ ဆရာရဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ သူက သတင်းစာအလုပ်ပဲ သူ့ဘဝမှာ လုပ်ချင်ခဲ့တာပေါ့”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
သတင်းစာဆရာကြီး အထောက်တော်လှအောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၇) နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားတွင် သတင်းစာသမားတစ်ဦးဖြစ်သော ဇီးကုန်းဦးခင်မောင်သိန်း၊ အထောက် တော်လှအောင်၏တပည့် ဆရာမျှားနီ၊ ဒေါ်ခင်သူသူဝင်း အစရှိသူများမှ ဆရာကြီးနှင့်ပတ်သက် သော အမှတ်တရများကိုပြန်လည် ပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာအထောက်တော်လှ အောင်သည် အထောက်တော်သတင်းစာ၌ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် သတင်းဂျာနယ်ကို ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ထုတ်ဝေကာ ၁၉၈၈ တွင် သတင်းမဂ္ဂဇင်း အဖြစ် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ရာ အဆိုပါသတင်းဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းမှာ လွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဆရာသည် ဘာသာပြန်နှင့် ပင်ကိုရေးစာအုပ် ၅ဝ ခန့်ကိုရေးသားခဲ့ရာ အဆိုပါစာအုပ်များသည်လည်း စာဖတ်ပရိသတ် အကြိုက်လွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ သော စာအုပ်များဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် အမှတ်တရ နေအိမ်ပြတိုက် ဒဂုံအရှေ့တွင် ဖွင့်လှစ်
စပါး၏ အောင်မြင်မှုကို လိဂ်ဖလားတွင် ဗိုလ်လုပွဲ တက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဆာရီ နှိုင်းယှဉ်
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့တော် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ပြည်ထောင်စု သင်္ကြန်ကိုပါ ထည့်သွင်း ကျင်းပ??
ပွင့်လင်းရာသီတွင် ခရီးသွားလာရောက်မှု များပြားမည်ဖြစ်၍ တည်းခိုရာတွင် အခက်အခဲမရှိရန် ဟိုတယ်?
ကော့မှူးနှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ ရဲစခန်းသို့ လာရောက် အဖမ်းခံ ၊ ဇနီးဟောင်းနှင့်တ?
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကို မြစ်ကြီးနားမြို့ ၌ ငါးရက်တိုင် ကျင်းပသွားမည်
‘သင်္ကြန်လေညင်း လုလင်’ တေးသီချင်းခွေ စတင်ဖြန့်ချိ